Mukanya returns to SA for X-mas gigs – Zimbabwe Daily
Mukanya returns to SA for X-mas gigs
(Last Updated on November 25, 2015 by Editor)
ZIMBABWE – Chimurenga music guru Thomas Tafirenyika Mapfumo is returning to South Africa within a space of three months for what he calls a Christmas Party for his fans.
Vava said Chimurenga Music fans should come in their numbers to for the two Christmas parties which Mukanya has lined up for them.
As Chimurenga Music Company, we encourage all music lovers to come in droves and see the Lion of Zimbabwe dish out hits from his rich discography as he will also be sampling songs from his forthcoming album Chinogiya to be released early next year, said Vava.
In 2012, the US-based musician was tipped to return after then Prime Minister Arthur Mutambara had identified his return as a plus for the rebranding of Zimbabwe.
ZIMBABWE - Chimurenga music guru Thomas Tafirenyika Mapfumo is returning to South Africa within a space of three months for what he calls a Christmas Party for his fans. Blessing Vava, Mukanya's publicist, told NewZimbabwe.com that Mapfumo, who has been i...